Midowga Yurub iyo Ingiriiska oo heshiis gaadhay | Berberanews.com
Home WARARKA Midowga Yurub iyo Ingiriiska oo heshiis gaadhay
Midowga Yurub iyo Ingiriiska oo heshiis gaadhay
Uk-(Berberanews)-Midowga Yurub iyo Boqortooyada Ingiriiska waxay gaadheen heshiis ganacsi kadib ka bixitaanka Uk, iyagoo soo afjaraya bilihii la isku khilaafsanaa xuquuqda kalluumeysiga iyo xeerarka ganacsiga mustaqbalka.
Shir jaraa’id oo uu qabtay Downing Street, Boris Johnson wuxuu ku yishi: “Waxaan dib ula wareegnay xakameynta sharciyadayada iyo aayaheena.”
Qoraalka heshiiska weli lama shaacin, laakiin RW wuxuu ku andacooday inuu ahaa “heshiis wanaagsan Yurub oo dhan”. Boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu wadaa inay ka baxdo sharciyada ganacsiga ee Midowga Yurub Khamiista soo socota – sanad kadib markii ay si rasmi ah uga baxday 27-kii dal ee ku bahoobay.
Waxay macnaheedu noqon doontaa isbeddello waaweyn oo xagga ganacsiga ah, iyadoo Boqortooyada Ingiriiska iyo Midowga Yurub ay sameysanayaan laba suuq oo kala duwan, iyo dhammaadka dhaqdhaqaaqa xorta ah.
Laakiin heshiiska ganacsigu wuxuu u noqon doonaa gargaar weyn ganacsato badan oo Ingiriis ah, oo durba la il daran saameynta coronavirus, oo ka cabsi qabay carqaladeynta xuduudaha iyo canshuuraha, ama canshuuraha soo dejinta.
Markii heshiiska lagu dhawaaqay, Mr Johnson – oo dhowr jeer ku celceliyay in Boqortooyada Midowday ay “si weyn u barwaaqoobi doonto” – wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray sawir isagoo dhoola cadeynaya labada suulna cirka kor ugu qaaday.
Shirkiisa jaraa’id, wuxuu ku sheegay in £ 668bn sanadkii heshiis “lagu ilaalin doono shaqooyinka dalkan oo dhan” iyo “in ay suurta galineyso in badeecadaha UK lagu iibiyo bilaa canshuuro, iyada oo aan kooto loogu sameynin suuqa EU”.
“Midowga Yurub wuxuu ku bilaabay waxaan u maleynayaa in la doonayo xilliga kala guurka oo ah 14 sano, waxaan dooneynay seddex sano, waxaan ku dhamaynay shan sano,” ayuu yidhi
Previous articleDhegayso Djibouti oo wefti xaqiiqo raadina u dirtay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya
Next articleReal Madrid oo 2-0 kaga badisay Granada